Breast Lump - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” ဟာ ရငျဘကျကိုစမျးကွညျ့လိုကျတာ အလုံးလေးတဈလုံးတှတေ့ယျ” ဒီကိစ်စဟာအမြိုးသမီးတှအေတှကျတော့ ထိတျလနျ့စရာတဈခုပါ။ ရငျသားအကြိတျဆိုတာ
ရိုးရိုးအကြိတျလညျးရှိသလို ဆနျးဆနျးပွားပွားကငျဆာအကြိတျလညျး ဖွဈနနေိုငျတာကိုး။ ဒါဆို ရိုးရိုးလား ဆနျးဆနျးလား ခှဲခွားဖို့ဆို ဖွဈလရှေိ့တဲ့ ရိုးရိုးရငျသားအကြိတျလေးအကွောငျး သိထားဖို့လိုမယျနျော။ စမျးမိလိုကျတဲ့ အလုံးလေးဟာ
ကိုငျကွညျ့လိုကျရငျ သဈသားကိုကိုငျသလို မာမနဘေူး။ ရျောဘာလုံးလေးလို အိအိလေးဖွဈနမေယျ။
ဟိုဘကျဒီဘကျ လကျညှိုးလကျမနဲ့ ကိုငျလှုပျကွညျ့ရငျ လှယျလှယျကူကူ လှုပျလို့ရနမေယျ။ ( ဒီလို အကြိတျလေးတှဟော အရမျးကို ရှလှေ့နျးလို့ Breast Mouse” ရငျသား ကွှကျကလေး” လို့တောငျ
အလုံးရှိတဲ့ ဘကျ ဒါမှမဟုတျ အခွားတဈဘကျရဲ့ ဂြိုငျးကွားနရောမှာ အလုံးအကွိတျထပျမစမျးမိဘဲရှိမယျ။
အခွား ပါးစပျပကျြတာ၊ ကိုယျအလေးခြိနျသိသိသာသာကပြွီး ပိနျသှားတာမြိုး မရှိဘူး ဆိုရငျတော့ ဒါ ရိုးရိုး ရငျသားအကြိတျလို့ အကွမျးဖငျြးမှတျယူနိုငျပါတယျ။
** သတိထားစခေငျြတာကတော့ ဘယျလိုရငျသားအကြိတျမြိုးမဆို ဆရာဝနျ စမျးသပျပွီးမှသာ အတညျပွူစခေငျြပါတယျနျော**
ဒီလို ရိုးရိုးရငျသားအကြိတျလေးတှဟော အဓိကအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးဟျောမုနျးဖွဈတဲ့ အီစတိုဂငျြ၊ ပရိုဂကျြစတိုဂငျြ ဟျောမုနျး (၂) မြိုး မညီမြှတာကွောငျ့ ရငျသားမှာရှိတဲ့ အဆီလေးတှေ ပှားပွီး ခဲလာတာကွောငျ့ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ဖွဈပှားတတျတဲ့အသကျအရှယျကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ အမြားအားဖွငျ့ အသကျငယျငယျ ၃၀အောကျတှမှောအဖွဈမြားပါတယျ။ ပိုဖွဈနျုငျခရြှေိတဲ့အခွအေနတှေကေတော့
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ( ရငျသားဖှံ့ဖွိုးခွငျးကွောငျ့)
မြိုးရိုးထဲမှာ ကငျဆာ ရငျသားအကြိတျရှိသူတှမှောအဖွဈမြားပါတယျ။ ဒီလိုရငျသားအကြိတျရှိသူတှေ အနနေဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွကွညျ့လို့ ရိုးရိုးအကြိတျသခြောပွီဆိုရငျ
ကှနျပွုတာဓာတျမှနျ( ultrasound) ရိုကျခိုငျးတာ တှနေဲ့ သခြောအောငျစဈဆေးနိုငျပါတယျ။ ရိုးရိုးအကြိတျသခြောတယျဆိုရငျတော့.
အရှယျအစားနဲ့ ခံစားရတဲ့လက်ခဏာပျေါမူတညျပွီး ခှဲစိတျကုသရတာမြိုးရှိနိုငျပါတယျ။
ဒါဆို ရငျသားအကြိတျလေးမြားရှိခဲ့ရငျ ဒီအခကျြလေးတှနေဲ့တိုကျဆိုငျစဈဆေးကွညျ့ပါလို့။
” ဟာ ရင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တာ အလုံးလေးတစ်လုံးတွေ့တယ်” ဒီကိစ္စဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ ထိတ်လန့်စရာတစ်ခုပါ။ ရင်သားအကျိတ်ဆိုတာ
ရိုးရိုးအကျိတ်လည်းရှိသလို ဆန်းဆန်းပြားပြားကင်ဆာအကျိတ်လည်း ဖြစ်နေနိုင်တာကိုး။ ဒါဆို ရိုးရိုးလား ဆန်းဆန်းလား ခွဲခြားဖို့ဆို ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရိုးရိုးရင်သားအကျိတ်လေးအကြောင်း သိထားဖို့လိုမယ်နော်။ စမ်းမိလိုက်တဲ့ အလုံးလေးဟာ
ကိုင်ကြည့်လိုက်ရင် သစ်သားကိုကိုင်သလို မာမနေဘူး။ ရော်ဘာလုံးလေးလို အိအိလေးဖြစ်နေမယ်။
ဟိုဘက်ဒီဘက် လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ကိုင်လှုပ်ကြည့်ရင် လွယ်လွယ်ကူကူ လှုပ်လို့ရနေမယ်။ ( ဒီလို အကျိတ်လေးတွေဟာ အရမ်းကို ရွေ့လွန်းလို့ Breast Mouse” ရင်သား ကြွက်ကလေး” လို့တောင်
အလုံးရှိတဲ့ ဘက် ဒါမှမဟုတ် အခြားတစ်ဘက်ရဲ့ ဂျိုင်းကြားနေရာမှာ အလုံးအကြိတ်ထပ်မစမ်းမိဘဲရှိမယ်။
အခြား ပါးစပ်ပျက်တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်သိသိသာသာကျပြီး ပိန်သွားတာမျိုး မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ ဒါ ရိုးရိုး ရင်သားအကျိ်တ်လို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
** သတိထားစေချင်တာကတော့ ဘယ်လိုရင်သားအကျိတ်မျိုးမဆို ဆရာဝန် စမ်းသပ်ပြီးမှသာ အတည်ပြူစေချင်ပါတယ်နော်**
ဒီလို ရိုးရိုးရင်သားအကျိတ်လေးတွေဟာ အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသမီးဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ အီစတိုဂျင်၊ ပရိုဂျက်စတိုဂျင် ဟော်မုန်း (၂) မျိုး မညီမျှတာကြောင့် ရင်သားမှာရှိတဲ့ အဆီလေးတွေ ပွားပြီး ခဲလာတာကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့အသက်အရွယ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အများအားဖြင့် အသက်ငယ်ငယ် ၃၀အောက်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ ပိုဖြစ်န်ုင်ချေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ( ရင်သားဖွံ့ဖြိုးခြင်းကြောင့်)
မျိုးရိုးထဲမှာ ကင်ဆာ ရင်သားအကျိတ်ရှိသူတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလိုရင်သားအကျိတ်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြကြည့်လို့ ရိုးရိုးအကျိတ်သေချာပြီဆိုရင်
ကွန်ပြုတာဓာတ်မှန်( ultrasound) ရိုက်ခိုင်းတာ တွေနဲ့ သေချာအောင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးအကျိတ်သေချာတယ်ဆိုရင်တော့.
အရွယ်အစားနဲ့ ခံစားရတဲ့လက္ခဏာပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသရတာမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ရင်သားအကျိ်တ်လေးများရှိခဲ့ရင် ဒီအချက်လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပါလို့။